Mashiripiti | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Kuisa kutukwa pamusoro pomunhu.
Kuisa kutukwa pamunhu. Munhu ane hunyanzvi hwakadai anogona kutuka; nerombo rakanaka, hapana akawanda acho. N'anga kana muroyi anogona kutuka, muroyi vanhu vane simba rakaringana pane izvi. ...
Ndiani anoziva izvo zvinyorwa zvisinganzwisisiki zvakagadziriswa zvehombodo inorevei? Inoshandura kukosha kwerutendo here?
ndiani anoziva shinda zvinorevei yakatenderedzwa inverted rune wolfhook zvinoreva? Zvinochinja kukosha kubva pakutendeuka? Zvakafanana nekushandurwa here? Chero chingataurwa nemumwe, zvicharamba zvakafanana, zvakanaka, pamwe ...
Kune magetsi here? Zvechokwadi?
Mashiripiti ariko here? Saizvozvo? Mashiripiti inzira uye nzira dzekuwana zvaunoda panguva ino, mushure mekuguma kwechimwe chiito. Iyi ipfungwa. Muhupenyu, n'anga papfungwa iyi inogona chete ...
Zvinoita here kutengesa mweya kumadhiabhori? sei?
Ndezvechokwadi here kutengesa mweya wako kuna dhiyabhorosi? se? chaizvo, unobuda uchienda kubazaar uko, mutsara wechitatu wakasviba kwazvo, uchinhuhwa mumakomba, iwe unouya ndokuuparadzira, ivo fuyak fuyak uye iwe hauna chinhu! handeyi nazvo ...
Kana munhu akazvarwa musi weChitatu, ipapo hupenyu hwake hwose husingafari ???
Kana munhu akazvarwa Chitatu mangwanani, saka hupenyu hwake hwese hungave husina mufaro ??? Sei uchifunga kudaro ??? Hapana chakadai! wawana kupi hupenzi hwakadai ?? Munhu wese akasiyana. Ndakazvarwa…
Mushure mekufa, mweya unoenda kupi? Mubvunzo kune van'anga, masayendisiti, vanoporesa uye avo avo vakatsinhanisa vakapindura mubvunzo uyu
Mushure mekufa, mweya unoenda kupi? Mubvunzo wemashiripiti, masvikiro, varapi nevaya vakapindurwa nemubvunzo uyu kana mweya wepanyika usingachengetwe nebhizimusi risina kupera, zvino rinobhururuka ...
Vanoda rubatsiro nekubhadhara nemubairo. Pane maneko anoshanda saiyo?
Unoda rubatsiro kubhadhara nekuita. Kune varoyi vanoshanda seizvi? Iye chaiye munhu chaiye anokuitira zvese zvese, zvakare nemhedzisiro, ndiye wandinogona kunge ndichingoziva ...
Minyengetero ipi yekuverenga kana iwe uchidzinga madhimoni?
Ndeupi rudzi rwemunamato wekuverenga kana uchidzidzisa kubva kumadhimoni? Munamato weMusande Anoshamisa Anoshanda Gregory wekudzinga mweya isina kuchena Pakutanga kwaive neShoko uye Shoko raive kuna Mwari uye Mwari aive Shoko. This…
Sawa, ndiudzei mutongi akanaka muNovosibirsk.
Mhoroi, ndiudzei svikiro rakanaka muNovosibirsk. Makore akati wandei apfuura pakanga paine matambudziko natezvara vangu. Iye aisandida zvakanyanya uye aigara achipindira murume wangu neni, achigara achimunyengetedza kuti ndakanga ndakashata ...
Dombo rhodonite chii icho chinobatsira?
Ndezvipi zvinhu zvinobatsira zveiyo rhodonite dombo? Zvemashiripiti zvivakwa. Ibwe rekunyepedzera. Munyika dzeEast neIndia, inoonekwa sedombo remwari rinomutsa rudo uye tarenda. Zvinotendwa kuti dombo iri rinogona ...
Runa Algiz uye kukosha kwayo kusinganzwisisiki.
Runa Algiz uye zvarinoreva zvakashandurwa. Runa Algiz mune inverted chinzvimbo Kurasikirwa kwekuchengetedza Rufu (zvimwe zvakawanda zvinoreva). Rune yekubatana nemweya wepasi uye wepasi nepachipfuva chenyika ne ...
Munhu angabvisa sei masimba echando nechando mukati mawe?
Unogona sei kusunungura iro remashiripiti simba rechando nechando? Iko kune kwekare kutenda kweCicero. Iwe unofanirwa kutenga dombo rekristaro - kristaro yakapetwa kaviri, enda nayo kutemberi yevanamwari vekare vechihedheni ...
Ungamutsidzira sei chido pamba?
Maitiro ekuunza chidhori kuhupenyu kumba? Vanhu vemashiripiti havapo, kunyangwe ndichifunga kuti izvi zvinoda: shuga, chidhori, mvura, chidimbu chejira, tochi, chero chinhu chemumhanzi (nyere, MP3 player, mumhanzi bhokisi kana kunyangwe ...
Nditaurire, ndapota, ndingadana sei Slenderman achishandisa girazi?
Ndokumbira undiudzewo kuti ungadane sei Slender Man uchishandisa girazi? Zvinoita kunge kwandiri zvisina basa kuti uite izvi, zvingave zvakanyanya kukuomera !!! sei uchida Slenderman kuti ufire mumatanera? iwe unofunga achati * nezve hello ...
Ndinoziva sei kuti kune kukanganisa kwandiri kana ziso rakaipa?
Ndinoziva sei kana paine kukanganisa kana ziso rakaipa pandiri? unogona kundibata uri wega, ndinoda pikicha uye zuva rako .. uye nezuva raunofunga. Vanhu vazhinji vanotaura nezvenyaya dzehuori, ...
Nzira yekuziva sei kana spell yakaita kana kwete?
Maitiro ekuziva kuti rudo rwechiperero rwakashanda here kana kuti kwete? Kana iko kutsinga kwerudo kwakashanda, saka hazvigoneke kuti usacherechedze kuita kwayo. Munhu anoenderana zvachose newe, pakukurukurirana newe. Uye kunyangwe nechekure, iye ...
Ini ndakarashikirwa nemari, kwenguva yakareba ini handigoni kuiwana, mari yacho yakakura, ndingawane kupi kana kuti ndine imwe nzira yekuzvipira?
Yarasika mari.Handina kuiwana kwenguva yakareba.Mari yacho yakakura.Ndingatarisa kupi kana kune chero hurongwa hwekutsvaga? kupfeka zvipfeko zvekunze zvakandibatsira, ndakawana 5500 rubles uye zvisati zvaitika kubva pa23 kusvika ...
Nzira yekuongorora kana pane kukuvadzwa kwako nekubatsira kweii
maitiro ekutarisa kana paine chero kukuvara pauri nerubatsiro rwezai, chete iro nyowani zai rinodiwa. ... rityore mugirazi pasina kukuvadza iyo yolk - kuitira kuti ridonhe rose - ndokuisa husiku kumusoro kwemubhedha ...
Chii chinonzi Glyphs? Mukuchera matongo, glyph mucherechedzo wakavezwa kana kunyorwa padombo (petroglyph) kana huni. Inogona kunge iri pictogram kana ideogram, kana chikamu chehurongwa hwekunyora senge syllabic kunyora ...
CHII chaungaita nekuveurwa kana vhudzi? nei vasingakwanisi kuiswa mumarara?
CHII CHEKUITA NESIMBA RAKAGADZIRWA KANA KUTI VANE Bvudzi sei vasingakwanise kuraswa mumarara? Bvudzi risina "kurasikirwa" Bvudzi "pasina kurasikirwa" Zvese zvinoitwa nemumwe munhu kwatiri, zvakadaro ...
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,455 masekondi.